မုစ်လင်မ် သူငယ်ချင်းများ ကျေးဇူးပြု၍ ဤစစ်တမ်း(Survey) ကို ဖြေပေးပါ။ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
မုစ်လင်မ် သူငယ်ချင်းများ ကျေးဇူးပြု၍ ဤစစ်တမ်း(Survey) ကို ဖြေပေးပါ။
မုစ်လင်မ် သူငယ်ချင်းများ ကျေးဇူးပြု၍
ဤစစ်တမ်း(Survey) ကို ဖြေပေးပါ။
ဒီနေ့ ဦးဇင်းတစ်ပါးရဲ့ ဗီဒီယိုခွေကို ကြည့်လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ အချက်အလက်အမှားတွေ ပါနေတယ်။ အဲဒီထဲက တစ်ခုကတော့ “ဟိုမှာ ကြည့်စမ်း ၇၈၆၊ ၇၈၆ ကို ပေါင်းလိုက်ရင် ၂၁။ ၂၁ ရာစုရောက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံသည် မုစ်လင်မ်နိုင်ငံ ဖြစ်ရမယ်။ ဒီလို သူတို့ စီမံကိန်းက။” အဲဒီဗီဒီယိုရဲ့ လင့်ခ်ကတော့
ကောင်းပြီ။ အဲဒီ ၇၈၆ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟာ ဦးဇင်း ဟောကြားခဲ့သလို “၂၁ ရာစုရောက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံသည် မုစ်လင်မ်နိုင်ငံ ဖြစ်ရမယ်”ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့ မုစ်လင်မ်တွေက သုံးနေတာလား။ မည်သည့် အဓိပ္ပါယ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက မုစ်လင်မ်တွေအနေနဲ့ သုံးနှုန်းနေခဲ့ရတာပါလဲ။
ကျနော်တို့ မုစ်လင်မ်တွေဟာ မည်သည့် အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်စကားကို ပြောဆိုသည်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်စာကို ရေးသားသည်ဖြစ်စေ၊ ကျနော်တို့ အစ္စလာမ် သာသနာ တော်မြတ်ရဲ့ ဆုံးမသွန်သင်ချက်အရ “ဗိစ်မိလ္လာဟိရ်ရဟ်မာနိရ်ရဟီးမ်”ဆိုတဲ့ အာရဗီဝါကျကို ရွတ်ဆို၊ သုံးစွဲ၊ ရေးသား၍ အစပြုကြရပါတယ်။ ဒီလိုအစပြုခြင်းကို မင်္ဂလာရှိ သော အမလ် (အပြုအမူ)အဖြစ် မှတ်ယူကျင့်သုံးကြပါတယ်။ “ဗိစ်မိလ္လာဟိရ်ရဟ်မာနိရ်ရဟီးမ်”ရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကတော့ “In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful”လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ မြန်မာပြန်ရင်တော့ “မပြတ်မစဲ သနားကြင်နာညှာတာတော်မူသော၊ အနန္တကရုဏာတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူသော၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ နာမတော်အားဖြင့် အစပြုပါအံ့”လို့ ရပါတယ်။
၇၈၆ ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အာရဗ်လူမျိုးတွေဟာ အဗ်ဂျဒ်လို့ခေါ်တဲ့ အက္ခရာတွေမှာ ကိုယ်စီ ဂဏာန်းတွေပေးတဲ့ စနစ်တစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အဗ်ဂျဒ်ဆို တဲ့ စနစ်ကို အခြေခံပြီး၊ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ “ဗိစ်မိလ္လာဟိရ်ရဟ်မာနိရ်ရဟီးမ်”ဆိုတဲ့ ၀ါကျမှာပါရှိတဲ့ အက္ခရာတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးတွေကို ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ ခုနှစ်ရာ၊ ရှစ်ဆယ် ခြောက်ရတဲ့အတွက် ၇၈၆ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို “ဗိစ်မိလ္လာဟိရ်ရဟ်မာနိရ်ရဟီးမ်”အား အာရဗီဘာသာစကားနဲ့ ရေးသားဖို့ အခက်အခဲရှိတဲ့ မုစ်လင်မ်တွေက သုံးစွဲခဲ့ကြတာပါ။ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယတိုက်ငယ်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသမှာရှိတဲ့ မုစ်လင်မ်တွေက ရေးသား သုံးစွဲခဲ့ကြတာပါ။
ဦးဇင်းအနေနဲ့ ၇၈၆ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဖွင့်ဆိုတင်ပြခဲ့သလို “၂၁ ရာစုရောက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံသည် မုစ်လင်မ်နိုင်ငံ ဖြစ်ရမယ်”ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့ မုစ်လင်မ်တွေက သုံးစွဲနေခဲ့ကြခြင်း အလျဉ်း မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုလည်း အစ္စလာမ်သာသနာတော်ရဲ့ မည်သည့် အာလင်မ် ပညာရှင် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ ဖွင့်ဆိုထားခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ဒီလို စွတ်စွဲချက်ဟာ အခြေ အမြစ်မဲ့၊ အထောက်အထားမဲ့ စွတ်စွဲချက်တစ်ရပ်သာ ဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်တမ်းကောက်(Survey)လုပ်ပြီး၊ တင်ပြပေးသွားပါ့မယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ သွန်သင်ချက် တွေကို အားလုံး သိရှိနားလည်သွားအောင်ပါ။ မုစ်လင်မ် သူငယ်ချင်းများ အားလုံး ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်ချက်များ (Comment)တွင် ဖြေကြားပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
၁။ ၇၈၆ သည် “ဗိစ်မိလ္လာဟိရ်ရဟ်မာနိရ်ရဟီးမ်”ဆိုသည့် အာရဗီဝါကျအစား သုံးစွဲခြင်း ဖြစ်သည်မှာ မှန်ပါသလား။
(က) လုံးဝ မှန်ကန်ပါသည်။ (ခ) လုံးဝ မှားပါသည်။ (ဂ) မသိပါ။
၂။ ထိုသို့ “ဗိစ်မိလ္လာဟိရ်ရဟ်မာနိရ်ရဟီးမ်”အား ၇၈၆ အက္ခရာဖြင့် သုံးစွဲရခြင်းသည် အာရဗီဘာသာစကားဖြင့် “ဗိစ်မိလ္လာဟိရ်ရဟ်မာနိရ်ရဟီးမ်”အား ရေးသားရန် အခက်အခဲရှိ၍ သုံးစွဲနေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်မှာ မှန်ကန်ပါသလား။
၃။ “ဗိစ်မိလ္လာဟိရ်ရဟ်မာနိရ်ရဟီးမ်”အား ၇၈၆ ဟု ဖလှယ်၍ ရေးသားသူများအနေနှင့် “၂၁ ရာစုရောက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံသည် မုစ်လင်မ်နိုင်ငံ ဖြစ်ရမယ်”ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့ မုစ်လင်မ်တွေက သုံးစွဲနေခြင်းဆိုသည်မှာ မှန်ကန်ပါသလား။
၄။ လူကြီးမင်း (မှတ်ချက်ပေးသူ)အနေနှင့် အခြား ရေးသားတင်ပြလိုသည်ကို တင်ပြပေးပါရန်။
ဤအမှတ် (၄) မေးခွန်း၏ အဖြေအား လွတ်လပ်စွာ ရေးသားတင်ပြနိုင်ပါသည်။ မဖြေလိုပါကလည်း ရပါသည်။ အရေးမကြီးပါ။
အခြေအမြစ်မဲ့၊ အထောက်အထားမဲ့သော စာအုပ်၊ စာတမ်းများကို ကိုးကား၍ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံဖန်တီးထားသော သတင်းအချက်အလက်များကို ဖြန့်ချိနေကြသောသူများ၏ မုသားဝါဒအသီးသီးမှ မြန်မာပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ကင်းဝေးလွတ်မြောက်ကြပြီး၊ ကိုယ်၊ စိတ်၊ ၀ိညာဉ်သုံးပါးစလုံး ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။ အာမီးန်။
This entry was posted on January 16, 2013, in အထူးကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← သေခါနီးဖြစ်တဲ့ စိတ်
ထိပ်တန်းရောက်နေသူ အများစုဟာ မတရား အမြတ်ကြီးစားကာ အခွန်တိမ်းရှောင်ချင်တဲ့ လူတွေ →